Sosochii Dargaggootaa - Seattle Traffic
Ijoolleen waggaa 5 fi gadii tolaan yaabatu.
Dargaggoon umrii 6- 18 cuftuu gatii deemsaa akkaan xiqqaa tahe argachuuf ulaagaalee ni guutu karaa kaardota ORCA Dargaggootatiin.
Barattotni Manneen Barnoota Hawaasaa Siyaatil hundinuu kan sadarkaa jiddu galaa fii sadarkaa lammaffa bilaashaan dangaa malee ORCA Opportunity Youth Pass dhaaf ulaagaa ni guutan.
Barattoonni Kolleejjiin Kibba Siyaatil (South Seattle College) ORCA barattootnii ittiin darban kan gatiin isaa akkaan xiqqaaf ulaagaa ni guutu.
Tajaajjilli autoobisaa Manneen Barnoota Hawaasa Siyaatilkan irratti hunda’u sadarkaa kutaa ittargamaniitiin, haga barattooni man baruumsaa irraa fagaatanii jiraatan, akkasumas wantoota biro kan ulagaa argachuu guutuuf barbaachisanidha.
Barattotni manneen bartnoota dhuunfaa kaardii ORCA Youth gama Metroo King Kawuntiitiin argachuu danda’u. Ji’ati hanga feetan kaardii ORCA Dargaggootaati fayyadamuuf ji’aan $54 itti dabaluun ni danda’ama. Yoo baraataan kee tajaajila geejjibaa guyyaa irraa mana baruumsaa deemee deebi’uuf yaabbachuuf yoo yaadaa qabatee, gatiin kun filannaa baasii akka gaaritti ir’isu.
Waa’ee nagayyummaa fi Nageenyaa ijoollee keettiti dhubadhu. Yadawwan muraasni kun kan hasawa san gargaaru Metroo irraa.
Konkolaataa fii Vaani nama waliin yaabbachuu
Mannee baruumsaa hedduun Konkolaataa waloo qinddeessan; mana baruumsaa kee yookan garee maatii odeeffannoo dabalataatiif gaafadhu.
Dargaggoon umri 18 gadii Vaanpoolii Metroo yaabbachuu ni danda’a nama heeraan eegumsi itti keennamme wajjiin.
Gaheessi eegumsaaf itti gafatamummaa qaban teessoo nageenyumaa qabu akka barbaachisetti dargaggootif akka barbaachisetti dhiheesuuf.
Konkolaataa waloo irraatti odeeffannoo dabalataaf peeji Metroo King Kaawuntii Konkolaataa Walo Dhiha Siyaatillaali.
Miilaan deemuu fi Saayikiin deemuu
Miilaa fii biskileettiin naannawa hawaasa isaanii keessa deedeemuun ijolleef karaa laafaa fii fayyaqabees.
Dabalamaa ykn eegalaa deemsa miilaa, awutoobisii mana baruumsaa yookaan biskileeti, baabura gara mana baruumsa keeti.
SDOT mana baruumsaa heddu waliin waliigaltee qabdi yaada kaka’uumsa Karaa Nageenya qabeessaa gara mana Baruumsaairratti
Sagaantaan SDOTDaandii Nagaan Turii fii Zoonii Mana Jireenyaa namootaa umrii maraaf akka miilaan fii biskileetiin deeman iddoo nagaa uumuuf hin gargaara.
Skuutarii fii Sayikilii Waloo
Warreen naannoo motorii fii iskuutara gurguran wanti barbaadan namoonni fayyadaman cufti wagaa 18 ol ta’uu qaban. Kuni tuqamee jira Walii galtee fii haalota fayadamiinsaa yeroo tokkoo tokkoo kubbaaniyyaa walii akkawuntii banatu.
Ijoolleen skuutariiwwan namni gudaan oofu waliin yaabbachuu hin qaban. Sababaa nageenyaatif jecha warreen skuutara dhiheessan wanti addaan baasanii ibsan skuutara tokkoo namni tokko qofaaf hayyaman.